Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo magacaabay Guddi daba gala Agaasimayaasha Waaxyaha
Sagal Radio Services • News Report • April 23, 2017
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa magacaabay Guddi ka kooban 7 xubnood oo ay Guddoomiye u tahay Dumar, kuwaasoo daba gal ku sameynaya sida ay u shaqeeyaan Agaasimayaasha Waaxyaha ee dowladda Hoose.
Dabageed “Madaxweynuhu gacan dhaaf ayuu ku sameeyay Maamulkii Hiiraan iyo Sh/Dhexe”
Sagal Radio Services • News Report • September 9, 2016
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axned Hagar “Dabageed”oo wareysi dheer siiyay Radio Jowhar ayaa ka hadlay arrimo kala duwan, isagoo ku eedeeyay Madaxweyne Xasan Sheekh in labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan maamulkooda uu u gacan dhaafay isla markaana aysan tixgelin ka helin dowlada.
Guddi ka soo tala bixinaya dhismaha Gole deegaan uu yeesho Gobolka Banaadir oo la magacaabay
Sagal Radio Services • News Report • March 21, 2016
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa magacaabay Guddi ka kooban 11 xubnood, kuwaasoo ka soo tala bixinaya dhismaha Gole deegaan uu yeesho Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xalay casho sharaf u sameeyay ciyaartoydii 11-jirada(Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • February 19, 2016
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xalay casho sharaf ugu sameeyay aqalka dowladda Hoose Ciyaartoydii 11-jirada ee ka qeyb galay Tartankii Jeem Cup ee lagu qabtay dalka Qadar.
Shirkadda Diyaaradda Daallo oo sheegtay in aanay saameyn doonin Qarixii Diyaaradda ka dhacay
Sagal Radio Services • News Report • February 9, 2016
Shirkadda Diyaaradda Daallo Airlines ayaa sheegtay in aanay saameyn ku yeelan doonin, qaraxii 2-dii bishan ka dhex dhacay gudaha diyaarada, xilli ay ka kacday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo booqasho ku jooga Magaalada London
Gudoomiyaha Gobolka Banadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa booqasho ku jooga magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Maamulka Galmudug oo Maamul cusub u sameeyay degmada Caabudwaaq (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • November 6, 2015
Maamulka Galmudug ayaa maamul KMG ah u magacaabay degmada Caabudwaaq ee waqooyiga Galgaduud, kaasoo noqonaya maamulkii u horeeyay ee heer degmo oo ay soo magacawdo, tan iyo markii Maamulka Galmudug lagu dhisay Cadaado .
Khilaaf u dhaxeeya Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo kuxigeenadiisa oo soo shaac-baxay
Sagal Radio Services • News Report • August 6, 2015
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso Jowhar.com ayaa sheegaya inuu soo if baxay khilaaf u dhaxeeya Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) iyo qaar ka mid ah kuxigeenadiisa, kaasoo ku saabsan awooda xaga maamulka ah.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo is bedelo iyo isku shaandheyn ku sameeyay Guddoomiyeyaal degmo
Sagal Radio Services • News Report • June 9, 2015
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa isku shaandheyn iyo is bedel ku sameeyay qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka, iyadoo tallaabadan ay tahay tii u horeysay ee uu Guddoomiyuhu uu isugu shaandheeyo Guddoomiyeyaal degmo.
Dowladda Federaalka & Maamulka Soomaaliland oo Heshiis wada gaaray
Sagal Radio Services • News Report • December 22, 2014
Wadahadaladii u dhexeeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Soomaaliland ee ka socday Magaalada Jabuuti ayaa la soo Gaba gabeeyay,iyadoona Labada Dhinac ay soo saareen Qodobo ay ku Heshiiyeen.
Maamulka Jubba oo ku eedeeyay Al-Shabaab inay dad rayid ah ku laayeen deegaanka Kudhaa
Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay dad rayid ah ku xasuuqeen deegaanka Kudhaa ee Gobolka Jubada Hoose, halkaasoo maalin ka hor ay la wareegeen.
Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo la sheegay in lagu dilay Duqeymo ay geesteen Diyaarado Dagaal
Sagal Radio Services • News Report • November 3, 2014
Afhayeen u hadlay Maamulka KMG ee Jubba ayaa shaaciyay in Saraakiil katirsan Dagaalyahanada Xarakada Al-Shabaab lagu dilay Duqeymo ay fuliyeen Diyaaradaha Dagaalka Dowlada Kenya .
Khilaafka Madaxda Somalia oo dib u dhigay Kulamadii Somalia iyo Somaliland
Sagal Radio Services • News Report • October 29, 2014
Khilaafka soo dhexgalay madaxda Soomaaliya ayaa sababay inuu dib u dhac ku yimaado wadahadalladii u socday Somalia iyo Somaliland oo lagu waday inay toddobaadkan ka dhacaan dalka isku-tagga Imaaraadka Carabta.
Maamulka Gobolka Banaadir oo ugu baaqay Madaxweynaha inuu soo fara geliyo khilaafka iyaga iyo Wasaarada Maaliyada
Sagal Radio Services • News Report • October 15, 2014
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya inuu soo fara geliyo khilaafka iyaga iyo Wasaarada Maaliyada u dhaxeeya ee ku saabsan qaadista canshuuraha magaalada Muqdisho,iyadoo Maamulka ku doodayo in la duudsiiyay xaqii ay u lahaayeen inay qaadaan canshuuraha gudaha.
Maamulka Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay Dagaal ka dhan ah Al-shabaab
Sagal Radio Services • News Report • July 22, 2014
Maamul goboleedka Koonfur-galbeed ee ka kooban lixda gobol ayaa wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Xarakada Al-shabaab, iyadoo shirkii looga dhawaaqay arrintan oo ka dhacay Baydhabo ay goob-joog ka ahaayeen saraakiisha AMISOM ee ku sugan gobolka.
Maamulka Jubba oo sheegay in ay fashiliyeen weerarro ay damacsanayd Al-shabaab
Sagal Radio Services • News Report • July 13, 2014
Gudoomiyaha gobolka J/hoose Mudane C/rashiid Gooni oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ika warbixiyay xaaladda ammaan ee magaalada Kismaayo, isagoo sheegay in ciidamada ammaanka maamulka Jubba ay fashiliyeen qaraxyo ay Al-shabaab damacsanayd in ay ka geysato magaalada Kismaayo.